Ka hortagidda "argagixisada" ee Britain - BBC News Somali
Ka hortagidda "argagixisada" ee Britain
Image caption booliska Britain
Dowladda Britain ayaa lagu booriyay inay sameyso isbedelo lagu sifeynayo “argagixisanimada” iyo in laga mamnuuca dalkaasi, halkii lala macaamiiltami lahaa wax lagu sheegay “xabaal” halista ka ka dhalato kooxaha xiriirka la leh Al-Qacidda.
Guddiga arrimaha gudaha u qaabilsan aqalka hoose ee barlamaanka Britain, ayaa sheegaya in booliska aysan cadeyn masuuliyadooda ah la dagaallanka wax ay ugu yeereen “argagixisada”, waxayna ku baaqeen in si adag loo eego qaladaadka dhanka ammaanka iyo laamaha sirdoonka.
Xafiiska guddigaasi ayaa sheegay inay xaqiijin doonaan dib u eegis lagu sameeyo hagaajinta xeerarka la dagaallanka argagixisada si loo arko haddii hormaro la sameyn karo.
Guddiga arrimaha gudaha ayaa sheegaya in sharciga Britain ee lagula tacaalo dadka looga shakiyo “argagixisada” ay waajib tahay inuu la socdo isbedelada kooxahan, Oo ay ku tilmaameen inay yihiin, kuwo isbedel badan, oo aan iskumid ahayn, eyna aad u ugu baahsan yihiin dunida.
Isbedelka ugu weyn ee la sameynayo ayaa ah in laanta cusub ee ka hortagta dembiyada ay kala wareegto booliska shaqada la dagaallanka “argagixisada”.
Sababta ugu weyn ee keentay culeyska ka ah In “walaaca baahsan” laga muujiyo shaqada booliska iyo dhibaatooyinka hadda jira ee ay wajahayaan, ayaa ah fikirka dhaliyay in la tixraaco sharciyada daahsoon ee la bandhigay.
Guddiga ayaa doonayo in ciidamada ay diiradda saaraan sida ay sheegaan xeerarka lagu saleeyay magaalada London.
Balse, sarkaal u hadlay booliska, ayaa tilmaamay in cadeynta qorshahan uu yahay mid aan taageero badan haysanin.
Mudanayaasha ayaa sidoo kale dalbanaya isbedel lagu sameeyo shaqada iyo masuuliayadaha laamaha ciidamada ee MI5, MI6 iyo GCHQ ee dalka Britain.
Wax uu aqalka sheegayaan in hannaanka ay wax u eegaan laamaha sirdoonka iyo guddiga amniga ay tahay mid aad u liidata, ayna suurtagal tahay inay curyaamineyso kalsoonida barlamaanka.